Soo-saaraha Heer-kulka Shiinaha - Hadalka Soo-gudbiyaha heer-kulka Tayada
Hoyga > Alaabada > Dareeraha heerkulka > gudbiye heerkulka
GL-136FTWD Nooca Waxsoosaarka Nooca Heerkulka Gudbinta Guud Astaamaynta isku xidhka rakibida iyo cabirka is haysta, GL-136FTWD gudbiye-teebbiraha gudbiyaha waa qiimo-wax ku ool ah, dhaqaale ahaan iyo wax ku ool ah, oo loogu talagalay soo saarista laba-silig oo ah 4-20mA signal. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa cabbirka heerkulka sida ......
Gudbiye heerkulka digital
Nooca Waxsoosaarka Waxsoosaarka Waxsoosaarka Iskudhafka Iskudhafka Isku-darka Nooca Waxsoosaarka: Isku gudbiyaha heerkulka isku dhafan wuxuu ka kooban yahay dareeraha heerkulka (thermocouple ama heerkulka resistor) iyo moduleka gudbiyaha laba wiretemperature. Wax soo saarku wuxuu isku darayaa signalacquisition heerkulka, magdhowga isha ...
Caabbinta kuleylka waa nooc ka mid ah heerkulbeegga warshadaha ee sida weyn loo isticmaalo, waxaa loola dhaqmi karaa heerkulbeegga caadiga ah. Ugu badnaan oo ay ku jiraan pt100, pt1000, Cu50, Cu100 noocyada, waxay noqon karaan dhismayaasha guntimaha iyo galka. Iska caabinta platinaum, saxsanaanta ugu sareysa waa ± 0.1â „ƒ (AA class), heerkulka ugu badan ee la adeegsado waa 600â ƒ.Haddii iska caabin Copper ah, saxsanaanta ugu sareysa waa ± 0.3â„ ƒ, isticmaalka heerkulka ugu sareeya waa 150â „. Cadaadiska kuleylka leh saxsanaanta sare iyo qiimaha hooseeya, ayaa si ballaaran loogu dabaqayaa noocyada wax soo saarka warshadaha ee ka hooseeya 500â „.
PLC maamusha Display Intelligent Iyadoo 485 Commun
Xakamaynta Heerkulka Iyadoo 485 Isgaarsiinta PLC Kumbiyuutarka Xakamaynta Heerkulka Qalabka D taxanaha xakamaynta muuqaalka caqliga leh waa nooc cusub oo qalab ah oo si madax-bannaan loo baaray lana soo saaray iyadoo la soo bandhigayo tiknoolajiyad casri ah oo ajnabi ah isla markaana looga gol leeyahay gaar ahaanta warshadaha tamarta-koronto. Saxsanaanta, faragelinta kahortaga, sirdoonka, xasiloonida, iyo isku halaynta aaladda ayaa gaadhay heer caalami ah oo heer sare ah, waxayna gabi ahaanba badali kartaa xakamaynta muujinta ee dibada laga keenay.
Soo gudbiye Iskuduwaha Heerkulka Cadeynta Qarax
Nooca cufan ee dareeraha heerkulka Pt100 wuxuu qaataa teknolojiyadda alxanka laysarka si looga hortago kala goysyada alxanku inay soo baxaan ama ay dhacaan haddii gariir xoog leh dhaco, taasoo wax ku ool ah u hagaajinaysa xasiloonida cabirka.Waxay si toos ah u cabbiri kartaa heerkulka dareeraha, gaaska ama uumiyaha. Waxay soo bandhigi kartaa xogta heerkulka halka ay ku taal, waxayna sidoo kale la socon kartaa oo koontarooli kartaa heerkulka nidaamka kombiyuutarka. Iyadoo la soo bandhigayo muuqaalka LED-ka, moduleka gudbiyaha ee la dhisay wuxuu sameeyaa habeyn toosan oo loogu talagalay calaamadda. Nooca cadeymaha qarxa wuxuu u hoggaansamayaa GB3836.1 - 2000 iyo GB3836.2-2000, waxaana loo isticmaali karaa munaasabado cayiman oo waxyaabaha qarxa-caddeyn u ah.
Bandhig dijitaal ah
Badeecadani waa nooc ka mid ah dareemayaasha gudbinta heerkulka caqli galka ah. Waxay heshaa 2, 3 iyo 4-silig Pt100 gelinta kuleylka kuleylka, waxay sameysaa habeyn toosan oo loogu talagalay calaamadaha soo-galinta iyo wax-soo-saarka heerka 4-20mA. Waxay leedahay shaqeynta qalabka dareeraha qaladka wareegga furan.
Testeck waa mid ka mid ah kuwa ugu xirfada badan gudbiye heerkulka soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan xor ayaad u tahay inaad iibsato tayo sare leh gudbiye heerkulka kaydka halkan oo ka hel xigasho warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.